Ugwayi / I-Gum Bin
Ugwayi / I-Gum Bin Imfucumfucu enobunikazi obuningi obunamakhono ahlukile, i-Smartbin ™ ifezekisa ingqalasizinda ekhona yomgwaqo njengamawele, emuva-emuva emuva nangaluphi usayizi noma ukwakheka kweposi noma uphawu lwezimpawu, noma ngefomathi yodonga ezindongeni, ojantshi nakuma-plinths. Lokhu kukhipha inani elisha, elingalindelekile kusuka ezimpahleni ezikhona zemigwaqo ukudala amanethiwekhi wezinqamu zikagwayi ezilula, ezitholakala ngokuqagela kanye nezinqola zama-gum ezihlala zitholakala, ngaphandle kokufaka imfuhlumfuhlu endaweni yemigwaqo. I-Smartbin iguqula ukunakekelwa kwemigwaqo emadolobheni emhlabeni jikelele ngokunika amandla okuphendula okusebenzayo kugwayi nakwindawo yokulahla inkunkuma.
Ibhokisi Lesipho Ibhokisi lesipho elibushelelezi likaJack Daniel's Tennessee Whiskey alilona ibhokisi elijwayelekile kubandakanya nebhodlela ngaphakathi. Lokhu kwakhiwa kwephakeji okungafani nenye kwenzelwa ukwakheka okuhle kodwa futhi nokulethwa ngokuphepha kwebhodlela ngasikhathi sinye. Ngenxa yamawindi amakhulu avulekile esingawabona kulo lonke ibhokisi. Ukukhanya okufika ngqo ebhokisini kuqokomisa umbala wokuqala we-whisky kanye nobumsulwa bomkhiqizo. Yize izinhlangothi ezimbili zebhokisi zivulekile, ukuqina okuphathekayo kuhle kakhulu. Ibhokisi lesipho lenziwe ngokuphelele kusuka kumakhadibhodi futhi kugcwele matte eyenziwe ngesitampu esishisayo nezinto zokuhlobisa.
Isifuba Semidwebo ILabyrinth ngu-ArteNemus yisigaxa sokudweba okubonakala kobuciko baso sakhiwo sigcizelelwa yindlela eyindilinga yayo, okhumbuza imigwaqo yedolobha. Umqondo omangalisayo kanye nendlela yokusebenza kwamadonsela kugcizelela uhlaka lwayo olungaphansi. Imibala ehlukile ye-maple ne-ebony veneer emnyama kanye nobuciko bekhwalithi ephezulu yezinga eliphansi ukugcizelela ukubukeka okukhethekile kweLabyrinth.
Ubuciko Bokubuka Iphrojekthi le ilandelana yemidwebo yedijithali ye-Scarlet Ibis kanye nemvelo yayo yemvelo, ngokugcizelelwa okukhethekile ngombala nokuqina kwawo okuqina okuqina njengoba inyoni ikhula. Umsebenzi uthuthuka phakathi kwezindawo zemvelo ezihlanganisa izinto zangempela nezokucabanga ezinikeza izici ezihlukile. Umbala obomvu yinyoni yomdabu yaseNingizimu Melika ehlala emaphethelweni naseziphepheni zasenyakatho neVenezuela futhi umbala obomvu okhanyayo wenza umbukeli ubukeke. Lo mklamo uhlose ukugqamisa ubuhle bendiza ebomvu obomvu nemibala egqamile yelena eshisayo.
Logo Njengoba iWanlin Art Museum yayisendaweni yekhampasi yaseWuhan University, ubuhlakani bethu babudinga ukukhombisa lezi zici ezilandelayo: Indawo yomhlangano ephakathi yabafundi yokuhlonipha nokubonga ubuciko, ngenkathi inezici zegalari ejwayelekile yezobuciko. Bekumele futhi ihlangane 'njengobuntu'. Njengoba abafundi basekolishi bemi ekuqaleni kwezimpilo zabo, le nyuziyamu yezobuciko isebenza njengesahluko sokuqala kubafundi ukwazisa kwezobuciko, futhi ezobuciko ziyohambisana nabo impilo yonke.
good morning original calendar 2012 “Farm” Ikhalenda Mgqibelo 12 Juni
inci I-Ceramic Lwesihlanu 11 Juni
Prisma Umtshina Weziphatho Ze-Ultrasonic Ezitholakalayo Lwesine 10 Juni
Ugwayi / I-Gum Bin Iwebhusayithi Ibhokisi Lesipho Isifuba Semidwebo Ubuciko Bokubuka Logo